‘वाणिज्य बैंक हरेक क्षेत्रमा १ नम्बरमा हुनुपर्छ’ – HamroKatha
‘वाणिज्य बैंक हरेक क्षेत्रमा १ नम्बरमा हुनुपर्छ’
यो अब्बल हुनुपर्छ, अब्बल बनाउनुपर्छ । केहि सुचकांकहरुमा हामी अगाडि छौं । अरु गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, सामाजिक उत्तरदायित्वका कुरा, वित्तीय साक्षरता लगायतका विषयमा पनि नमुनाका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
हाम्रो कथा २०७५ भदौ ७ गते १७:०१
(कुनै समय समस्यामा परेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अहिले धेरै सुचकांकमा अब्बल देखिएको छ । गत वर्ष धेरै बैंकहरु तरलताको समस्याले गुज्रिरहँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नाफा कमाउने वाणिज्य बैंकमध्ये अग्रस्थानमा आयो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको वाणिज्य बैंकले कसरी यस्तो छलाङ्ग मार्यो ? यसै विषयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठसँग रोजिना थापाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
किरण कुमार श्रेष्ठ
प्रश्न: कुनै समय एकदमै खराब अवस्थामा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अहिले नाफा कमाउने बैंकको नम्बर १ मा पुग्यो । यो चमत्कार कसरी भयो ?
उत्तर: वास्तवमा २०६० सालभन्दा अगाडि बैंकको अवस्था अत्यन्तै खराब थियो । भाका नाघिसकेको कर्जा (एनपीए) नै ६० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । अरु सूचकांकहरु पनि नकारात्मक नै थिए । त्यसपछि बैंकबाट वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आयो । बैंकको कमजोरी वा विकृति पहिल्याउने काम सुरु भयो र बैंकले गति लिन थाल्यो । यसले अहिले सम्म आईपुग्दा देशकै बैंकहरुमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाउन सफल भयो । क्रमिक विकासले यहाँसम्म आईपुगेको हो ।
प्रश्नः सरकारी स्वामित्वमा रहेका निकायहरु नोक्सानमा हुन्छन् भन्ने बुझाई धेरैमा छ । तर सरकारी बैंकहरुले कसरी राम्रो गरिरहेका छन् ?
उत्तर: यहाँ दार्शनिक मान्यता पनि छ । सरकारको स्वामित्व भएको संघ/संस्था हुनेवित्तिकै त्यो असफल हुन्छ । त्यसले सेवा दिन सक्दैन, घाटामा जान्छ, डुब्छ वा बन्द गर्नुपर्छ । अथवा सरकारले जहिले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ र केहि अवस्थामा कतिपय संस्थामा त्यस्तो भएको पनि हो । तर वास्तवमा अहिले तीनवटा बैंक कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हेर्छु । र मैले आफ्नै बैंकको बारेमा कुरा गर्दा सरकारको स्वामित्व हुँदा राम्रो हुने वा नहुने भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन ।
यो स्वामित्व भन्दापनि व्यवस्थापनको कुरा ठूलो हो । व्यवस्थापन हामीले कसरी गर्छौ, त्यहाँभित्र हामीले कस्तो वातावरणमा काम गर्न पाउछौ ? कसरी वातावरण निर्माण गर्छौ ? त्यहाँभित्रको हाम्रो ‘टिम वर्क’ कसरी चल्छ ? हामीसँग भएका स्रोत साधनहरुको कसरी सदुपयोग गर्छौ वा प्रभावकारी उपयोग गर्छौ ? अझ यो भन्दापनि ठूलो कुरा के छ भने हामीले हाम्रो आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थापन गरेर संस्थागत सुशासनलाई ठीक ठाउँमा राख्ने हो भने सरकारी स्वामित्व रहेपनि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं, गरिरहेका छौ ।
प्रश्न: यहाँले कर्मचारीलाई कसरी काममा प्रेरित गर्नुहुन्छ ?
उत्तर: यसमा धेरै कुरा छन् । पहिलो त वातावरणकै कुरा हो । मैले मेरो टिमलाई हाम्रो लक्ष्यमा किन र कसरी पुग्ने भनेर भिजन स्पष्ट गरेको छु जस्तो लाग्छ । अर्को कुरा उनीहरुको भावना अथवा चाहनालाई सकेसम्म सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्छौ । ट्रेड युनियनलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने, उनीहरुसँग पनि असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरेर अघि जाने काम गर्छौ । अनि कुनैपनि निर्णय गर्दा बढि मात्रामा सहभागिता गराएर सहभागिता मुलक ढंगले अघि बढाएका छौं । मलाई लाग्छ यो नै हाम्रो सफलताको एउटा मुख्य कडी हुनसक्ने अनुभव मैले गरेको छु ।
प्रश्नः तपाईको ‘लिडरसिप स्टाईल’ के हो ?
उत्तरः व्यवस्थापनको भाषामा भन्नुपर्दा सामुहिक सहभागितामुलक काममा विश्वास गर्छु । यस अर्थमा प्रजातान्त्रिक छु जस्तो लाग्छ ।
प्रश्नः तपाई हिजो र आजको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तुलना गर्नुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?
उत्तरः त्यो त सपना जस्तो छ । २०६० साल अघि ६०/६३ प्रतिशत एनपीए थियो । अहिले ५ प्रतिशत भन्दा कम ३÷४ प्रतिशतको कुरा गरिरहेका छौं । हिजो २४ अर्ब घाटामा थियो । नाफा भन्ने कुरा हुन्छ र भन्ने परिकल्पनाबाट आज हामी एकै वर्षमा ४ अर्ब नाफा गरिरहेका छौं । ७५ प्रतिशत सिडी रेसियो कायम गर्न सकेका छौं । दुई अर्ब भन्दा कम पुजीँबाट आज हाम्रो ९ अर्ब १२ लाखको पुँजी पुगेको छ । सबै सुचकांक हेर्दा त छलाङ नै मारेको छ ।
प्रश्नः परिवर्तनको यो छलाङ मार्ने परिस्थिति कसरी सम्भव बन्यो ? यसमा यहाँको भूमिका के रहेको जस्तो लाग्छ ?
उत्तरः यसमा म भन्दा अगाडिका पूर्वजहरुको पनि नाम लिनुपर्ने हुन्छ । अगाडि जुन विदेशी व्यवस्थापक थियो । सिईओहरु हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुको पनि योगदान रह्यो र त्यो जगलाई टेकेर माथि उठने काममा म सफल भएँ ।
प्रश्नः आगामी दिनमा बैंकलाई लिएर तपाईको सपना के छ ?
उत्तरः वास्तवमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्रोत साधनले सम्पन्न छ । सरकारी स्वामित्वको बैंक, ५० बर्षभन्दा लामो इतिहास छ । यो सबै देखिसकेपछि मलाई के लाग्छ भने यो बैंक बैकिङ क्षेत्रको हरेक क्षेत्रमा १ नम्बरमा हुनुपर्छ । यो अब्बल हुनुपर्छ, अब्बल बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । अहिलेपनि केहि सुचकांकहरुमा हामी अगाडि छौं । डिपोजिटमा, नाफामा र सम्पतिको हिसाबमा हामी १ नम्बरमै छौ । तर अरु गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, सामाजिक उत्तरदायित्वका कुरा, वित्तीय साक्षरता लगायतका विषयमा पनि नमुनाका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अरुले हेर्दापनि सरकारले जे सोचेर बैंक स्थापना गरेको थियो त्यो सार्थक भयो भन्ने बनाउनुपर्छ । यो मेरो सपना हो ।